समाचार Archives - Page3of 10 - Simpal Khabar
हामी यातायात व्यवसायी गर्न छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने हो ? हेर्नुहोस ऋषि धमला र यातायात व्यवसायीको यो घमासान लडाई (भिडियो)-
हामी यातायात व्यवसायी गर्न छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने हो ? हेर्नुहोस ऋषि धमला र यातायात व्यवसायीको यो घमासान लडाई (भिडियो)-हामी यातायात व्यवसायी गर्न छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने हो ? हेर्नुहोस ऋषि धमला र यातायात व्यवसायीको यो घमासान लडाई (भिडियो)- हामी यातायात व्यवसायी गर्न छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने हो ? हेर्नुहोस ऋषि धमला र यातायात व्यवसायीको यो घमासान लडाई (भिडियो)-हामी यातायात व्यवसायी गर्न छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने हो ? हेर्नुहोस ऋषि धमला र यातायात व्यवसायीको यो घमासान लडाई (भिडियो)- हामी यातायात व्यवसायी गर्न छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने हो ? हेर्नुहोस ऋषि धमला र यातायात व्यवसायीको यो घमासान लडाई (भिडियो)-हामी यातायात व्यवसायी गर्न छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने हो ? हेर्नुहोस ऋषि धमला र यातायात व्यवसायीको यो घमासान लडाई (भिडियो)- याता
योजना अनुसार सुवासले साँझ सालकोट जंगलमा भेट्न दवाव दिए । अन्तत सुवासको योजना अनुसार नै गिता सालकोट पुगिन, त्यसपछि…..
सुर्खेत – सुर्खेतमा एक युवकले भिरबाट धकेलेर युवतीको हत्या गरेका छन् । विवाह नभइकन यौन सम्पर्क भएपछि युवतीले विवाह गर्न दवाव दिएपछि युवकले भिरबाट धकलेर युवतीको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सुर्खेतको पञ्चपूरी–२, सालकोटकी २१ वर्षीय गिता चपागाँईको बराहताल गाउँपालिकाका कुनाथरीका १९ वर्षका सुवास बोहोराले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको संयुक्त अनुसन्धानले गिताको हत्या सुवास बोहोराले गरेको खुलासा भएको हो । शारिरीक सम्बन्धपछि गर्भ रहेकोले गिताले पटक–पटक विवाह गर्न भनेपछि सुवासले गिताको हत्या गरेका हुन् । गिताले पटक–पटक विवाह गर्न भनेपछि सुवासले गितालाइ हत्या गर्ने योजनासहित सालकोट वरीपरी भेट्न दवाव दिए । भेटमा उनीहरुबीच विवाहकै विषयमा झगडा पर्यो । पछि पञ्चपूरीको जामुने जंगलको भिरबाट धकलेर सुवासले गिताको हत्या गरे ।
नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । विनिमय दर भन्नाले एउटा मुद्राको अर्को मुद्रामा विनियम गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बुझाउँदछ । दुई मुद्रा विचको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रालाई अर्को मुद्रामा साट्नको लागी प्रयोग गरिने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ । उदाहरणको लागी नेपालमा अमेरिक डलको विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । आजको मुद्राको दर यसप
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा चालक र सहचालक नजाने कम्पनीमा जाने सरकारी निर्णय यातायात मजदुरको हितमा
५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सिण्डिकेट तोडेको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रने बताइरहेका छन् । तर, गाडी मालिकहरुको सो आन्दोलनमा चालक र सहचालक लगायतका यातायात मजदुरहरु सहभागी नहुने भएका छन् । ‘विगतमा यातायात व्यवसायीहरुले गर्ने हरेक आन्दोलनमा हामी मजदुरहरु सहभागी हुँदै आएका थियौं, तर, यसपालि ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छौं,’ नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले व्यवसायीहरुले गर्ने भनेको आन्दोलनमा यातायात मजदुरहरु सहभागी हुँदैनन् ।’ सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरु खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने नियमावली ल्याएको विरोधमा व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन् । तर, व्यवसायीले अघि सारेका मागहरुमा यातायात मजदुरहरुको एउटा पनि माग नसमेटिएकाले आफूहरु आन्दोलनमा नलाग्ने अध्यक्ष राईले स्पष्ट पारे । मजदुर ने
यसरी फेरियो सडकपेटीमा गाउँदै हिड्ने अशोक दर्जीको जीन्दगी (भिडियो सहित)
यो पनि पढ्नुहोस हामी ऊर्जा पाउन केरा खान्छौं । तर जापानीहरु भने आफ्नो तौल घटाउनका लागि आफ्नो दिनको सुरुवात केरा र मनतातो पानीले गर्दछन् । विज्ञका अनुसार यसले तौल तीब्र रुपमा कम हुने र यो वैज्ञानिक रुपमा नै पुष्टि भइसकेको बताइएको छ । तर यसले तौल मात्र घट्ने नभई यसका अन्य फाइदा पनि छन् । यसकारण निकै छिटो घट्छ तौलः विज्ञका अनुसार मनतातो पानी पिउँदा शरिरको मेटाबोलिजम बढ्छ । मेटाबोलिजम बढ्नुको अर्थ बोसो घटाउने शक्ति बढ्नु जसले तौल घटाउन सहयोग गर्दछ । – केरा खाँदा शरिरले पूर्ण रुपमा ऊर्जा पाउँदा र पेट भरिएको महसुस हुन्छ । यो हुँदा शरिरले केही खाने इच्छा कम हुन्छ । जब कसैले कम खान्छ तब तौल नियन्त्रणमा त हुने नै भयो । – मनतातो पानी र केरा खाँदा पाचन क्रिया पनि सुधार आउँछ । यसले तौल घटाउनमा सहयोग गर्दछ । कसरी अनुसरण गर्ने यो तरिकाः बिहान उठ्ने बित्तिकै एक ग्लास मनतातो पानी पि
आज अक्षय तृतीयामा सयौं वर्षमा एकपटक हुने दुर्लभ संयोग, भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम
काठमाडौं। बुधबार अक्षय तृतीयाको दिन सयौं वर्षमा हुने दुर्लभ योग बनेको छ । अक्षय तृतीया तिथि भोलि बिहान पौने ४ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । सूर्य सिद्धान्त ग्रन्थमा वर्णन गरिएअनुसार कृतिका नक्षत्रको प्रथम चरणमा मेष राशीमा सूर्य हुँदा सत्ययुग प्रारम्भ भएको थियो । भविष्य पुराणका अनुसार त्रेता युगको प्रारम्भ पनि यही दुर्लभ योगमा भएको थियो । यही योगमा बद्रीनाथ धाममा नरनारायणको अवतरण भएको थियो । भोलि पनि यही दुर्लभ संयोग परेको छ । यस्तो संयोग सयौं वर्षमा एक पटक मात्र पर्छ । ज्योतिषाचार्य वीरेन्द्रनारायण मिश्रका अनुसार यो योग निकै उत्तम फल दिने योग हो । मिश्रका अनुसार अक्षय तृतीयाका दिन पिण्ड बिना पनि श्राद्ध गर्न सकिने विधान छ । यो दिन गंगा र तीर्थ स्नानको विशेष महत्व छ । जल भरिएको कलश, पंखा, जुत्ता, भूमि दानको पनि यस दिन विशेष महत्व हुन्छ । अक्षय तृतीयाका दिन गंगा स्नान गर्नु निकै पुण्ड मानिन्छ । ज
१८ वर्षपछि घर फर्कदा ६ जना छोराछोरीसहित श्रीमतीलाई अर्कैसँग भेटेपछि…
डीबी विष्ट/उज्यालो । बझाङ, वैशाख ४ – बुंगल नगरपालिका–८, का हिरा कामी अहिले ४० वर्ष हुनुभयो । २०३४ सालमा जन्मनु भएका कामीले २०५१ मा १७ वर्षको उमेरमा गाउँ नजिकै रहेको बुंगल नगरपालिका –८, कै मंगली बिकसँग विवाह गर्नुभयो । पञ्चेबाजा बजाएर दुलहीलाई घर भित्र्याउनुु भयो । हिरा कामी २ वर्षको हुँदा नै उनका बुवा राइसिङे कामीको निधन भएको थियो । हिराकी आमा सुन्दरी कामीले हिरालाई खुबै मेहनत गरी पालनपोषण गर्नुभयो । सुन्दरीको एउटै छोरो भएकाले हिराको बाल्यकाल निकै राम्रो थियो । सुन्दरीले भन्नुभयो, ‘बुढेसकालको सहारा नै मेरो एउटै छोरा हिरा थियो । घरमा खान लगाउन केही पनि थिएन ।’ उहाँको जग्गा पनि उब्जनी हुने खालको थिएन् । अर्काको घरमा गएर मागेर, कसैको काम गरेर खानु पर्ने बाध्यता पहिलेदेखि नै थियो सुन्दरी कामीको । उब्जनी हुने जग्गाबाट २ महिना समेत राम्रोसँग खान पुग्दैन थियो । ‘एक जोर कपडा नयाँ कहिल
गृहसचिव भन्छन्-गाडी नचलाउने सिन्डिकेटवालालाई थुन्छौं, सेवा रोकिँदैन सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर चलाउने गृहकार्य
४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सिन्डिकेटको बचाउन माग गर्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका व्यवसायीलाई अत्यावश्यक सेवामा कुनै हड्ताल नगर्न आग्रह गरेको छ । आफ्नो आग्रहलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक यातायात बन्द गरे कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अत्यावश्य सेवाका हड्ताल गरिए सरकार हात बाँधेर नबस्ने बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकार सरकारले प्रयोग गर्छ । समितिहरुले हड्तल सिर्जना गरेर यातायात बन्द गरे अन्य कम्पनी आउँछन्,’ उनले भने,’हड्ताल गर्ने सिन्डिकेटवालाई सरकारले थुन्छ ।’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले वैशाख २० गते सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । २६ गतेदेखि देशभर नै अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने महासंघको तयारी छ । तर, सरकारले पनि व्यवसायीको यो योजनाको प्रतीरक्षा गर्न आन्तिरिक गृहकार्य थालेको छ । अब यातायात बन
श्रीमान् विदेशिएको मौका छोपेर अर्काकी श्रीमतीसँग यौन सम्बन्ध, श्रीमान् फर्केपछि ब्ल्याकमेलिङ
काठमाडौँ । कमला शाह (नाम परिवर्तन) उमेरले ३४ पुगिन् । कमलाको साथमा रहेकी एउटी छोरीलाई उनको साथमै छाडेर श्रीमान् विदेश गएका थिए । धनुषाकी कमला श्रीमान् विदेशीएपछि काठमाडौँमा एउटा कस्मेटिक पसल खोलेर यतै बस्न थालेकी थिइन् । बिहान बेलुकाको हातमुख जोर्न कस्मेटिक व्यापारले पनि भरथेग गरेकै थियो । उनी सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) चलाउँथिन्, एकदिन राजीव कर्ण नामका एक पुरुषले उनलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाए । धुनषा उप–महानगरपालिका–८ बस्ने ३७ बर्षका राजीव कर्ण विद्युत्त प्राधिकरण धनुषा वितरण केन्द्रको कम्युटर अपरेटर हुन् । आइटीमा राम्रो दख्खल राख्ने राजीव र कमलाबीच फेसबुकको म्यासेन्जर मार्फत च्याटिङ हुन थाल्यो । साथी बनेको केही दिनमै राजीवले कमलालाई भेट्ने प्रस्ताव राखे, कमलाले पनि स्वीकार गरिन् । कमलालाई भेट्न काठमाडौँको पशुपतीनाथ मन्दिर पुगेका राजीवले पहिलो भेटमै कमलालाई अङ्गालो हाले अनी सेल्फी खिच्न
क्रुर ग्रह मङ्गल र पापी ग्रह शनि निकट हुदाँ १८ अप्रिलसम्म हलचल मच्चिने, यी राशिहरुमा पर्नेछ यस्तो असर
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रमा मङ्गल ग्रहलाई क्रुर ग्रह र शनि ग्रहलाई पाप ग्रह मानिन्छ । जब यी दुवै ग्रह एकै भावमा एक-अर्काको अत्यन्तै निकट हुन्छ तब यी दुवै ग्रहहरुबीचको कोण १० डिग्री भन्दा कम अन्तर आउँछ । हो यसै अवस्थालाई ग्रह युद्ध भनिन्छ । ज्योतिष शास्त्रमा मंगल सेनापति ग्रह हो, जबकि शनि पापक ग्रह हो । फलाम धातुलाई शनि र भूमिलाई मङ्गल मानिएको छ । यस्तोमा दुवै ग्रह धनु राशिमा सँगै आएको छ । यी दुवै ग्रह एक-अर्काको शत्रु भएको कारण आपसमा टकराव आउँछ जसको कारण अलग-अलग राशिमा प्रभाव पर्छ । मङ्गल-शनिको योग राम्रो मानिदैन । यो अवस्था आगामी १८ अप्रिलसम्म रहनेछ । मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) यस घटनाको सबैभन्दा बढी प्रभाव मेष राशिमा पर्नेछ । उनीहरुको लागि यो स्थिति समस्याजनक हुनेछ । दुर्घटना हुन् सक्छ र सानो-तिनो चोटपटक लाग्न सक्छ । यस समस्या समाधानको लागि यस राशिका म
राती सुत्ने बेला यो चिज दुइ थोपा मात्र लगाउनुस र… (2,155)
१०० जना केटाको लिङ्ग यसरी समातिन यी युवतीले (भिडियो सहित) (1,935)
के हुदैछ वैशाख १० गते को दिन, यो जानकारी थाहा पाऔँ ! (1,097)
तपाईका लागि यस्तो छ भोलि २०७५ साल बैशाख ९ गते… (174)
राती सुत्ने बेला यो चिज दुइ थोपा मात्र लगाउनुस र… (133)
श्रीमतीको यौन इच्छालाई पूरा गर्न नसक्ने पुरुषलार्इ… (92)
१०० जना केटाको लिङ्ग यसरी समातिन यी युवतीले (भिडियो सहित) (78)
बच्चा नै नबस्ने गरी साधन बिना कसरी यौन सम्पर्क गर्न… (60)
आज पनि बढ्यो ३ बर्ष कै उच्च मुल्य मा आज… (33)